Wafdi Saraakiil Iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya oo Weerar Lagu Qaaday Iyo Al-Shabaab oo Sheegatay | Codka Bulshada Media Network	Sunday, May 19th, 2013	Home
Wafdi Saraakiil Iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya oo Weerar Lagu Qaaday Iyo Al-Shabaab oo Sheegatay
Codkabulshada Media Network (Muqdisho)Wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya C/Kariin Xuseen Guuleed oo maanta socdaal ku tagay magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa lagu soo waramayaa in galabta xilli ay dib ugu soo laabanayeen magaalada Muqdisho weerar lagu qaaday.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose C/salaam Maxamed Cabdulle oo ka mid ahaa wafdiga la socday wasiirka ayaa sheegay in xilli wafdiga wasiirka uu ku sii jeeday degmada Marka ay dhexda u galeen koox hubeysan oo uu sheegay inuu u maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al Shabaab.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ciidamada la socday wasiirka oo isugu jiray ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay iska caabiyeen weerarka ay ku soo qaadeen meel u dhow degaanka Shalanbood, isla markaana ay ku guuleysteen in ay kala ceyriyaan kooxdii weerarka soo qaaday.
“Ma jiro wax khasare ah oo aan aragnay illaa hadda, waxay koox yar oo jidka gashay waana kala ceyrinay” ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo sheegay in safarka wasiirka uu ku soo gabagaboobay si nabdoon.
Wafdiga wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo ay ku jireen saraakiisha ciidamada dawlada ayaa magaalada Marka kulan kula soo yeeshay saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada iyadoo ay ahayd markii ugu horeysay oo wasiirka arimaha gudaha uu ku tago degmada Marka tan iyo intii dawlada cusub la dhisay.
Dhanka kale weerarka galabta lagu qaaday wafdiga wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa sheegtay ururka Al Shabaab, iyadoo warbaahin ku hadasha afka Al Shabaab ay galabta shaaciyeen in dagaalyahano ka tirsan ururka Al Shabaab ay fuliyeen weerarkaasi.